ကိုရီးယားအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
Loading ... နှစ်တွေ, တောင်ကိုရီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမြင်းပြိုင်ပွဲ, စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လှေလူမျိုး, အဖြစ်ထီအတွက်ဂိမ်းအပေါ်အလောင်းအစားကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ SportsToto (SportsToto) 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ 2000 မှာ, တရားဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာသီးသန့်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ တစ်ဦးတည်းသာလောင်းကစားဝိုင်းအိမ်ကိုဒေသခံလူဦးရေမှဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွက် slot ကစက်တွေသာကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်ခွင့်ပြုထားပါသည်ကတည်းကသူတို့လည်းတောင်ကိုရီးယားကန့်သတ်ထားပါသည်။
တောင်ကိုရီးယား၏နိုင်ငံသားများလည်းပြည်ပမှာသာမကပြည်တွင်းမှာ, အလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားရာမှပိတ်ပင်ထားပေမယ့်။ သင်တန်း၏, Check, ဒီတားမြစ်ချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်ရန်ခက်ခဲပေမယ့်တင်းကြပ်စွာ3နှစ်ပေါင်းထောင်ဒဏ်နှင့် 25 000 အမေရိကန်ဒေါ်လာအထိတစ်ဒဏ်ငွေတစ်ဦးအနည်းဆုံးသက်တမ်းနှင့်အတူတရား "အကျွမ်းတဝင်နိုင်ငံခြားကစားသမား" နဲ့အညီအပြစ်ပေးကျော်လွှားဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ (ထက်နည်း 10 ဆင့်) တွင်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအင်္ဂါတို့တွင်ကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ Lotto နှင့်တူတူဒရောကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုထီရှိပါတယ်, တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog အွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွက်သတိပြုပါ။ ဒုတိယအားကစားလောင်းကစားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားမှာမရှိပညတ်တရားကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားလည်းမရှိ။ တစ်ချိန်တည်းမှာလူမှုရေးနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကန့်သတ်ရည်ရွယ်အများအပြားစည်းမျဉ်းများရှိခဲ့ကြပြီ။ ယခုအချိန်တွင်တပါးတိုင်းပြည်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုက်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏ဥပဒေရေးရာအဆင့်မှာမဟုတ်နိုင်။ သို့သော်စနစ်တကျပြစ်မှုဆိုင်ရာအုပ်စုများက run တရားမဝင်တွင်ကျယ်စွာရှိပါတယ်။ သူတို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများအားဖြင့်တွေ့ရှိကြသောအခါ, ဤဆိုဒ်များကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်, ပြီးတော့ကိုယ့်အဖြစ်လျင်မြန်စွာသစ်တွေဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
တောင်ကိုရီးယား၏လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးကသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းနှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ အစိုးရက၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေး၏စောင့်ရှောက်မှုကြာကြောင့်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာနှင့်အတူပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲကိုစတင်ရန်အစီအစဉ်များကြေညာခဲ့သည်။ အားကစားအပေါ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များပေါ်တွင်တိုးပွားလာအာရုံစိုက်။
တောင်ကိုရီးယားအနေဖြင့်ကစားသမားများလက်ခံသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေနှင့်တောင်ကိုရီးယားအနေဖြင့်ကစားသမားများရရှိနိုင်ပါသည်ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
သို့သော်လီနာ, သင်နိုင်ငံရေးကိုငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတော်မမူကြောင်းကောင်းစွာသိလောင်းကစားဝိုင်းအကြောင်းကိုဆိုပါတယ်မရနိုင်ပါ။ ဒါဟာဆိုးလ်, ကိုရီးယား၏အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံတွင်တည်ရှိသည် - ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill.Ono ကလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်သင့်ရဲ့အများဆုံးအကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေထဲကတစ်ခုကိုအားပေးအားမြှောက်သောကွောငျ့သငျသညျကခစျြလိမျ့မညျ - Robert De Niro ။ သို့မဟုတ်သင်အယ်လ် Pacino ကြိုက်သလဲ? De Niro အများအပြားလမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အပေါ်ပုံဖော်အဖြစ်မည်သို့ပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါသူပရဒိသုကာစီနို Walkerhill ၏တိုက်ရိုက်ပိုင်ရှင်ကြောင်းစဉ်းစားရန်စတင်သောအခါအချိန်လေးရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill သာနိုင်ငံခြားသားများအများစုဂျပန်နိုင်ငံသားများကစား။ ကိုရီးယားသူတို့ကိုယ်သူတို့သာအလုပျသမားအဖြစ်ရှိပါတယ်: ဖဲဝေသူမန်နေဂျာများ, စားပွဲထိုး, ဖျော်ယမကာစပ်, အနုပညာရှင်နှင့်အခြားသူများ။ စကားမစပ်ဒီလောင်းကစားရုံမှာဝန်ထမ်းအလွန်ကောင်းလှ၏။ အားလုံး, ယဉ်ကျေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အလွန်မဟုတ်တစ်ခုခုအဖြစ်သာရုရှားနှင့်အတူ, ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်, ဂျပန်နှင့်အခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားများဟောပြောလော့။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်အဘယ်သူမျှမရိုငျးစိုငျး, unmotivated ကျူးကျော်များနှင့်မကောင်းတဲ့သဘောထားတွေ။ သငျသညျကိုခစျြအရာအားလုံး, လီနာ။
သူတို့ကိုမကြာခဏလောင်းကစားများ၏တီထွင်မှုနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုသောသူ, မုသာသင်သိအဖြစ်ကြောင့်အခုတော့ကအသေးစိတ်သို့သွားကြဖို့အချိန်ပါပဲ။ ကာစီနိုခရိုင် Kavanchzhin-Gu လမ်း Uokerhil-177 အတွက်ဒါပေမယ့် Sheraton ဟိုတယ်၌ဆိုးလ်တွင်တည်ရှိသည်။ ပင်ငါလိပ်စာသတိရဘယ်လောက်ငါ့ကိုမမေးပါနှင့်။ တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုအင်တာနက်ပေါ်၌တွေ့ရှိခဲ့နှင့်တက္ကစီများကရောက်ရှိခဲ့သည့်လောင်းကစားရုံရန်, ဖွင့်မောင်းသူနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြောပြပါ။
Walkerhill နှစ်ဦးစလုံးအပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းပိုင်းကြီးမြတ်လှပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံသာရုပ်ပုံများကိုတင်းကြပ်စွာသာဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်အစေခံ မှလွဲ. တားမြစ်သည်။ ကာစီနိုပိုင်ရှင်တွေ client များသည် flash ကိုချိုးဖောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေချင်ကြပါဘူး။ ထို့အပြင်အချို့သောလူတို့သည်မိမိတို့ဝါသနာလောင်းကစားဝိုင်းအကြောင်းကိုရှက်ဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်ဒုက္ခနှင့်အတူဤအအကြောင်းရင်းများသည်။ ဒါပေမယ့်လီနာ, ငါသည်နေဆဲရိုက်ကူးဖို့စီမံတစ်ခုခုစိတ်မပူပါနဲ့။
ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill နာရီဝန်းကျင်နှင့်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ မျက်နှာကိုထိန်းချုပ်၏အသွင်အပြင်နှင့်အချို့ရှိအလွန်တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ သင်သည်သူတို့၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့အောက်တန်းဆင်မြန်း၏တဦးတည်းဝတ်ဆင်လျှင်သင်မဟုတ်လျှင်လီနာ, ခွင့်ပြုမပြုစေခြင်းငှါ, သင်၏အဖေဆက်ဆက်စင်းဘောင်းဘီတိုအတွင်းမိသားစုလက်လွတ်နှင့်လာသောသေတ္တာလှန်ပေါ်တွင်ညစ်ပတ်ခြေအိတ်ဝတ်ထားသည်မဟုတ်။ တောင်မှဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဂျပန်အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးကြည့်အတော်လေးလက်ခံနိုင်ဖွယ်စဉ်းစားကြောင်း။
အိမ်မှာ, ဂျပန်စကားပြောသောအဲဒီယောက်ျားတွေအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်ဘို့ ဖြစ်. , အေးမြခြင်းနှင့် reserved, ဒါပေမယ့်ပြည်ပကသူတို့အစားထိုးလျှင်အဖြစ်။ ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill ငါ Tanaka Esutigatsu ၏အမည်အားဖြင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းဖို့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်သည့်အခါတစ်ခါတုန်းကသူ Ninja ကိုအဆွေအမျိုး၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိသူ့ကိုမေးတယ်။ သူကသူ့ကောက်အံသွားဖေါ်ပြခြင်း, ရယ်မောဖို့စတင်ခဲ့နှင့်ဟွန်ဒါနွယ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုဆိုသည်။ ထိုအခါငါကျွမ်းဖို့ဆန္ဒပြုအဆိုပြုထား။ ဂျပန်မကောင်းတဲ့အတွက်သည်းခံအရက် - ဒါကြောင့်ငါအမြဲပြောဆိုကြပြီ, ငါမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ကော့တေးကို အသုံးပြု. ၏နာရီဝက်အကြာတွင် Tanaka ရုတ်တရက်အင်္ဂလိပ်မေ့လျော့ခြင်းနှင့်ငါ Blackjack များအတွက်စားပွဲပေါ်ကခုန်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကောလာဟလစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာပြီးသားလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု glances Oblique စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကောင်လေးငြိမ်သက်သွားစေနဲ့သူ့ကိုစားပွဲ၌လျောင်းကြစေတော်မူ၏။
ဒါကြောင့်သင် Blackjack ဿုံသမ္မာသတိရှိကြလော့ကစားခြင်း, လီနာကိုငါသိ၏။ ဒါနဲ့သူသည်ဆင်းရဲသောသူဂျပန်ကကူညီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်သူ့ကိုအချို့သောချစ်ပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါဂိမ်းစတင်ခဲ့ပြီးငါမကံကောင်းပါစေ, $ 3,000 အဆိုပါလောင်းကစားရုံအကူအညီရံပုံငြေထံသို့ ဝင်. ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Tanaka တစ်နည်းနည်းနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူကပိုကောင်းယခုကြည့်ရှုလျက်, ကလေးဆန်သောပျူတစ်ခုချင်းစီကိုအောင်ပွဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ သူ့ကိုငါနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုနိုင်ရန်အတွက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်ဖုန်းခေါ်သွားလေ၏။ စကားပြောဆိုမှုကောင်းတစ်ဦး 40 မိနစ်ငါ့ကိုတော့ဘူး။ Tanaka ပြန်လာအပေါ်သို့ပြီးသားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနုတ် 15,000 အတွက်စွန့်ခွာဖို့စီမံထားပါတယ်။ သူကငိုနဲ့သူ့ဂျာကင်အင်္ကျီ, ရှပ်အင်္ကျီ, ဖိနပ်နဲ့ Casio ရဲ့နာရီကို တင်. အားပူဇော်စတင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့အစောင့်သူတို့ကိုငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ဂျပန်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Uselessly ။ ထိုကဲ့သို့သောအပန်းဖြေ၏ရှားပါးနာရီအတွင်းဂျပန်ဖြစ်ကြောင်းကို - သို့သော်ငါသည်သင်တို့ကိုလီနာ၏အနှစ်သာရကိုနားလည်ထင်ပါတယ်။
, လီနာမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ Tanaka ရဲ့အားလုံးညာဘက်အတူ။ သူ Sheraton မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ အဘယ်သို့ငါမသိခဲ့ပါ။ ဒုစရိုက်ဖြေကျနော်တို့ကတက္ကစီ၌ထိုင်နဲ့ကျွန်မသူနေထိုင်ရာမေးရန်စတင်မထွက်ရအိမ်တော်ကို Tanaka မှရောက်စေဖို့ငါ့ကိုသတိပေးခံရ။ ဤတွင် poluzasnuvshy ဂျပန်အချို့ biliberdu ကိုထမ်းလာတယ်။ ငါသာ reply နိုင်ရန်: "! သင်သည်အဘယ်မှာ fuck ဆိုတဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေကြတယ်" ဟုရလဒ်အဖြစ်, သူ့ဖုန်းကိုအသံနဲ့သူကရုတ်တရက်ထ sobered ။ ငါန်ထမ်းများကသင်၏အခန်းရဖို့ကသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့ပြီးသောနောက်, ဟိုတယ်ဝင်ပေါက်ဖို့ဂျပန်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ပုံမှန်ကောင်လေး - နောက်ပိုင်းငါ Tanaka သဘောပေါက်လာတယ်။ ဟုတ်ကဲ့, ဒီကောင်းစွာလောင်းကစားရုံ $ 15,000 ထားခဲ့ဖို့မတတ်နိုင်စေခြင်းငှါ, ပုံမှန်ပါပဲ။ ပေမယ့်ကခါတိုင်းလိုဂျပန်မာနထောင်လွှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာပရဒိသုကာစီနို Walkerhill ပြန်သွားကြဖို့ သာ. ကောင်း၏။ Blackjack တကယ်စဉျးစားစရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အကြီးမားဆုံးလောင်းကစားရုံကိုရီးယား,7slot ကစက်တွေ, ဖဲချပ်များနှင့်ကင်လုပ်ခိုင်းဘို့တစ်ဒါဇင်စားပွဲအဖြစ်စားပွဲ၏ kakoe- ဟာမသိမမြင်နိုင်သောအရေအတွက်ကိုအကြောင်းကိုဘယ်မှာ 15 ကွဲပြားခြားနားသောကစားတဲ့သည်အခြားဂိမ်းများ, Blackjack များအတွက် 150 စားပွဲ, ရှိပါတယ် Baccarat သည်။ ကလူတောင်ကိုရီးယားမှာထင်ဘာဖြစ်လို့ငါကဒီဂိမ်းဒါရေပန်းစားသည်, မသိရပါဘူး။
ပေမယ့် Baccarat အချို့စက်ဝိုင်းထဲမှာဝယ်လိုအားနေဆဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်တက္ကဆက် Hold'em သို့မဟုတ်တိပ်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းကို Walkerhill အားဖြင့်သူမကဒါလှပသောခဲ့:
လီနာ, တင်းကြပ်စွာငါ၏အချည်းနှီးသောလူဆိတ်ညံလျက်ရုပ်ပုံတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ကြဘူး, အဲဒီမှာခက်ခဲရိုက်ကူးနှင့်အတူကဲ့သို့တူညီသောပြောကြပါတယ်။ ထိုမျှမကသူမရှိခဲ့သည်အထိပါပဲ။ ဤနေရာတွင် Walkerhill ခြုံငုံလေထုအကောင်းဆုံးကဒီဓါတ်ပုံကိုသဘောဆောငျ:
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill ၏စတော့ရှယ်ယာယူဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကျယ်ဝန်း, ကောင်းသောန်ထမ်းတစ်ဦးအကြီးအဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်, ဂိမ်းများများစွာသောရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာအားနည်းချက်များကိုဖြစ်စျနိုငျသလဲ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်၏ခံစားချက်, ဒါကြောင့်တချို့လောင်းကစားရုံလည်းမရှိနဲ့စနစ်တကျဖြေလျှော့မပေးပါဘူး။ နောက်ကျော Baccarat များအတွက်ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill လည်းအများအပြားစားပွဲအတွက်, သို့သော်ဤငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောဆိုချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စကားကိုဝင်အဖြစ်: ကဒ်ကြိုက်နှစ်သက်မနေပါနဲ့ - ကံဇာတာ၏ဘီးလည်။
သို့တိုင်ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill ကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Robert De Niro မကောင်းတဲ့အကြံပေးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျလီနာရောဘတ်မယုံလျှင်မူကား, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ်ကအားလုံးကိုသွားနှင့်စစ်ဆေးမောင်း, ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းကြပါဘူး။ တောင်မှငါပိုက်ဆံပေးနိုင်ပါသည်။ ပရဒိသုကာစီနို Walkerhill ငါတကယ်ကြိုက်တယ်အဖြစ်စိတ်မကောင်းမခံစားရပါစေနဲ့။